AmaZulu afuna ukunciphisa igebe phakathi kweDowns | Scrolla Izindaba
AmaZulu afuna ukunciphisa igebe phakathi kweDowns
Umdlali wasesiswini waMaZulu, uMakhehleni Makhaula, ukholelwa ekutheni ukunqoba uma sebebhekene neStellenbosch kuzosiza ekunciphiseni igebe leMamelodi Sundowns kowe-DStv Premiership.
AmaZulu azongena ejabule kulo mdlalo ozoba se-Danie Craven Stadium eKapa, ​​ozoqala ngehora le-5 ntambama emuva kokunqoba umdlalo ngesikhathi bebhekene neBlack Leopard. Kanti iStellenbosch sizokhuthazwa ngamaphuzu esiwathole ngesikhathi sidlala ngokulingana ngo 2-2 neKaizer Chiefs ngoLwesibili.
Ukunqoba koSuthu kuzolubeka endaweni yesibili etafuleni le-DStv Premiership, ngamaphuzu amathathu emuva kweMamelodi Sundowns ebihambela phezulu.
UMakhaula utshele abezindaba ze-PSL ukuthi ugqozi luphezulu ngemuva kokunqoba umdlalo weBlack Leopards e-Thohoyandou Stadium.
“Ngicabanga ukuthi umdlalo wethu neStellenbosch ubaluleke kakhulu ngoba uma singawina, sizovala igebe leMamelodi Sundowns,” kusho uMakhaula.
“ISundowns ngeke ivule igebe phambili futhi okuhle ukuthi sisazodlala nabo,” kusho yena.
Lo mdlali wasesiswini osebenza kanzima odabuka e-Randfontein, uvumile ukuthi kuzoba ngumdlalo onzima futhi kumele bazilungiselele.
“Ngeke kube ngumdlalo olula ekuhambeni, kodwa futhi nomdlalo obuse-Thohoyandou Stadium ubungelula neze. Siyawazi amandla nobuthakathaka beStellenbosch,” kusho uMakhaula.
Leli qembu laseKZN lisaqhubeka nokungahlulwa emidlalweni eyishumi nanye, linqobe eyisishiyagalombili laphinde ladlala ngokulingana kwemithathu ngaphansi komqeqeshi uBenni McCarthy. Kanti uMakhaula ubesejwayelekile kuleli qembu selokhu ejoyine esuka e-Highlands Park.